Asiyeke izinto ezingabalulekile: Dumitru | Isolezwe
Asiyeke izinto ezingabalulekile: Dumitru
Isolezwe / 28 June 2012, 12:50pm /
INKAKHA yomqeqeshi uTed Dumitru ugxeka indlela okudlalwa nokungakhuliswana ngayo ebholeni laseNingizimu Afrika. Isithombe: GALLO IMAGES
UKULIBALA yizinto ezingenamsebenzi kunokuthi kukhulunywe ngokuthuthukiswa kwebhola eNingizimu Afrika kwenza elakuleli lisale cishe ngeminyaka ewu-10 kwamanye amazwe.
Lona ngumbono woqweqwe lomqeqeshi uTed Dumitru othe okubalulekile okuzothuthukisa ibhola kuleli kushaywa indiva.
Lo mqeqeshi, owanqoba isicoco seligi amahlandla amane, ubona ukungakwazi ukucabanga, ibhola lokugqisha emuva nokungabakhululi abadlali enkundleni nobugwala kulibulala ibhola lakuleli.
“Silibala wukunaka ukuthi wubani okufanele aqokwe noma axoshwe. Uma izinto zingahambi kahle, sigxeka umqeqeshi. Asinaki futhi silibala yizinto ezingabalulekile,” kusho lo mqeqeshi owayepheka iKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns.
“Kufanele sizibuze imibuzo ewukhiye. Sicabanga ngokwanele yini? Sinabo abadlali abasezingeni? Sidlala ibhola elihle? Kwamanye amazwe umphakathi nabezindaba bayawucubungula umdlalo ngayo yonke indlela. Lapha sihlale sigxeka abantu.”
UDumitru, osanda kubuya eNetherlands naseFrance, uveze ukuthi abaseHolland babambe inkulumompikiswano ngekusasa lebhola labo emva kokuphoxeka bephuma kuseva ku-Euro 2012 edlalelwa ePoland nase-Ukraine.
“Bakhathazekile ngokuthi abanabo abadlali abakwazi ukwenza izinto zenzeke. Bafuna ukubona izwe labo linabadlali abanobuchule obufana nobukaChristiano Ronaldo noLionel Messi. Empeleni kukhona lapho ngifunde khona bethi bafuna ukubona abadlali basemuva abakwazi ukuhlasela,” kusho lo mqeqeshi odabuka eRomania.
UDumitru, owaziwa ngokuzikhulumela, uveze nokuthi abadlali baseNingizimu Afrika nase-Afrika yonkana banezimpendulo ebholeni lesimanje ngaphakathi kubo. Ngokusho kwakhe abadlali base-Afrika banakho konke okudingekayo ukuphumelela ebholeni.
“Ngokokuzalwa abadlali base-Afrika baphiwe ubuchule nobuhlakani. Ngokwendalo banethuba elingcono kunabanye. Inkinga ngebhola lase-Afrika wukuthi sisabambelele ebholeni lakudala lase-Europe nabo asebaliyeka. Bafuna abadlali abanomjiko manje. Yilapho ibhola lethu lishoda khona. Abadlali bethu bacindezelwa kakhulu, bayatshelwa ukuthi ungajiki noma bachitha isikhathi eside bephethe ibhola. Kufana necala kumdlali ukudlula kubadlali abane,” kusho uDumitru owayeqeqesha iqembu lesizwe laseZambia.
Njengoba isizwe sonke sigxeka indlala yamagoli kuBafana Bafana, uDumitru uthe kufanele kugxilwe ezindleleni zokuhlasela nokuthuthukiswa kwamakhono, okuyizinto ezidingekayo.
“Kufanele sikhohlwe yizinto ezingalungile ebholeni lethu. Ukugqisha emuva akusasebenzi manje. ENingizimu Afrika u-70% wabadlali bahlakaniphile uma kuhlaselwa. Ngisho nabasemuva kufanele bavunyelwe ukuya phambili, baphinde balekelele uma kuhlaselwa. Abantu bangasho nje ukuthi kubekana engcupheni lokho kodwa ebholeni kufanele ukwenze. Ibonakele indlela uLucky Lekgwathi noSiyabonga Sangweni abakade behlasela ngayo ngesizini edlule. ESchool of Excellence sakwenza lokho kwaphuma uMbulelo Mabizela,” kusho uDumitru oyilungu losomaqhinga beSafa.
Lo mqeqeshi uncome kakhulu igalelo lonompempe kuleli athe balenyuse kakhulu izinga nokwenza abadlali bangesabi ukudlala ngokukhululeka.